Daawo: Hooyada Ikraan oo u jawaabtay Fahad Yaasiin, fariina u dirtay Xasan Sheekh - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Hooyada Ikraan oo u jawaabtay Fahad Yaasiin, fariina u dirtay Xasan...
Daawo: Hooyada Ikraan oo u jawaabtay Fahad Yaasiin, fariina u dirtay Xasan Sheekh
Muqdisho (Caasimada Online) – Hooyadii dhashay gabadhii la waayey ee Ikraan Tahliil oo maanta hadal heynta kiiskeedu uu cirka isku shareeray ayaa ka jawaabtay eedeyntii uu Fahad Yaasiin maanta u jeediyey R/Wasaare Rooble, Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Al-Cadaala.
Fahad ayaa wareysi uu bixiyey wuxuu maanta ku sheegay in Ikraan ay dileen seddaxdaas nin oo kaashanaya Mahad Karataay oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab.
Hooyo Qaali Maxamuud Guhaad ayaa si adag uga hor timid eedeyntaas ka soo yeertay Fahad Yaasiin, iyadoo sheegtay in kiiska Ikraan uusan meelna u dhaafi doonin Fahad iyo saaxiibadiisii shaqada, gaar ahaan Yaasiin Farey iyo Kulane Jiis oo ay carabaawday.
Waxay sheegtay in Fahad uu uga baxay balan uu la galay gabadheeda oo sii maqan 18 maalmood, xilligaas oo uu ka balan qaaday in labo maalmood gudahood uu xog buuxda uga keeni doono halka la geeyey Ikraan, balse dib dambe uu taleefan uga qaban waayey.
Waxay kiiskaan ka beri-yeeshay raga uu dusha ka saaray Fahad Yaasiin, iyadoo Ra’iisul Wasaaraha ku amaantay sidii uu ugu hagar baxay, una qabtay doorashooyinkii dhibka badnaa ee dalka ka dhacay.
Waxay codsi u dirsatay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka dalbatay inuu deg deg u furo gal-dacwadeedka kiiska Ikraan oo ay geeyeen maxkmadaha dalka.
Maamo Qaali ayaa mar kale ku celisay in Madaxweynihii hore Farmaajo uu ka hiiliyey oo ragii gabadheeda dilay uu garab siiyey, iyadoo ku catowday in Madaxweyne Xasan Sheekh ay ka dooneyso inuu u buuxiyo kaalintii ay shalay uga baahneed Farmaajo.
Ugu dambeyntii Hooyo Qaali Guhaad waxay fariin u dirtay shacabka, culumada, odayaasha dhaqanka Soomaalida iyo dhamaan cid kasta oo garab istaagi karta, iyadoo ka codsatay in kiiskaan ay ka hadlaan oo ku garab siiyaan cadaaladda.